UYilo lweMagazini oFumana Uyazi | Abadali be-Intanethi
Namhlanje asikuzisi enye into kwaye akukho nto ingaphantsi kwamanye amatye anqabileyo ngokwemiqathango yoyilo lokuhlela. Ayizizo iimagazini oya kuzifumana kumagumbi okulindela oogqirha bamazinyo, kwaye kwezinye iimeko, okanye kwiindawo zokuthengisa iindaba. Siza kukufundisa ezinye imizekelo yoyilo lweemagazini, ingqokelela yeemagazini eziyilwe kakuhle zehlabathi.
Kolu luhlu, uya kufumana uthotho lweemagazini, eziya kusebenza njenge isalathiso kunye nenkuthazo xa usenza uluhlu, uhlengahlengiso, unyango lwayo yomibini imifanekiso kunye ne-typography, ukusetyenziswa kakuhle kwezithuba, njl.
1 iimagazini ezingcono kakhulu
1.3 Beka phantsi
iimagazini ezingcono kakhulu
Kweli candelo siza kudwelisa i Uyilo lwemagazini olugqwesileyo phaya namhlanje ezitratweni nakwilizwe ledijithali.
Iphephancwadi iTIME yenye yeempapasho eyona idumileyo kwihlabathi liphela, yimagazini enembali yegraphic enomtsalane. Esinye sezona mpawu zibalaseleyo zokupapashwa yindlela yokugubungela, apho abalinganiswa abakwindawo ephakathi kwekhava kunye nezinto ezijikelezileyo zibonakala.
Ngaphakathi kwimagazini kukho a Ulwakhiwo olulungileyo lwegraphic kunye nomxholo obanzi kakhulu kwaye osebenza ngokugqibeleleyo wokubhaliweyo, ukongeza kuyilo lwe-infographic, imizobo, njl.
Sithetha nge iphephancwadi lanamhlanje elikhethekileyo kwindlela yokuphila, unokufumana nantoni na iresiphi yokupheka, ingxelo yoyilo lwangaphakathi, kwinqaku malunga ne-baroque architecture.
ICereal, yaziwa ngokuba yimpapasho ecocekileyo nebonakalayo, ibiya kuba liphephancwadi eliqhelekileyo esilishiya eshelufini kuba lihle. Ibonisa uyilo oluhle kakhulu lokuhlela, iifoto eziphathwe ngokufanelekileyo ezingabalinganiswa bamaphepha amaninzi apheleleyo, kunye nendawo emhlophe enononophelo. Imagazini eveza uyilo kwiikona zayo zone.
I-Jot Down ibandakanya amaphepha angaphezu kwama-300 phakathi kwamaqweqwe ayo, iya kuqwalaselwa phantse incwadi. Isitayela esibonakalisa iphephancwadi kukusetyenziswa komnyama nomhlophe kunye noyilo olubonakaliswe kulo lonke uhlelo.
Isithuba nge isitayile esincinci, sinoyilo olulumke kakhulu, i-infographics enamandla kakhulu ngokubhekiselele kuyilo, ii-pictograms eziya kukushiya umlomo wakho uvulekile kunye nesitayela esihle kakhulu yiloo nto i-Jot Down ikuloluhlu njengenye yezoyilo zemagazini.
Kule meko sithetha ngeMetropoli, yiyo ukuzonwabisa kunye nenkcubeko supplementation ezinikezelwa liphephandaba, El Mundo, ngoko ke unokufumana le kwiikhiyoski.
URodrigo Sánchez ngumyili womhleli kwivili lolu papasho, uninzi lwazo luphawu indlela amaqweqwe abo adibana ngayo nomxholo ophambili oza kunyangwa.
Ngubani na ongaziyo okanye owakhe weva ngelizwi likaThixo? imagazini yoshishino eyaziwa kakhulu kwihlabathi. IForbes yafika eSpain malunga no-2013, kwaye ukususela ngoko iye yaba yenye yeemagazini ezithengwa kakhulu kwiindawo zeendaba.
Uyilo lwale magazini luphawu lwe ukusetyenziswa koonobumba abakhulu kunye neebhokisi zemibhalo emincinci kumaqweqwe abo, asele eyinxalenye yophawu lwabo. Ngaphakathi, sinokufumana iifoto eziphathwe ngononophelo olukhulu, imidlalo yokuchwetheza efana nezihloko zeendaba, umhombiso kwiibhloko zeteksti, iipaleti zemibala eyahlukeneyo, njl.
Kule meko sithetha nge upapasho lobugcisa nenkcubeko, olwaqala ukuvela ngowama-2009. Indlovu ipapashwa rhoqo emva kweenyanga ezintathu, kwaye isasazwa kulo lonke elaseYurophu kunye nakwezinye iindawo ezinjengeTshayina, iKorea, iJapan, iMelika neCanada.
Indlovu, ngokuqinisekileyo yayo umgangatho kunye nokunyamekela ekucacisweni kweemodeli, ukusetyenziswa kweendawo ezingenanto ziyinto engakholelekiyo, ngaphezu kwayo yonke unyango kunye noyilo olunayo ngaphakathi.
ITapas yi iphephancwadi kwi-gastronomy kunye neendlela zokutyela, ezinikezelwe kwabo babizwa ngokuba yi-foodies, kubathandi bokutya okumnandi. Ikwiqela elifanayo neli sikhe salibona ngaphambili, imagazini yeForbes, kwiqela leSpainmedia.
Tapas, lupapasho apho isitayile esinesibindi, esimnandi siqaqambile ngoyilo oluhle lokuhlela. Inoguqulelo lweSpanish kunye nelinye ilizwe.
Kwakumalunga nexesha lokuba iimpapasho zezemidlalo zishiye ngasemva isimbo esidala, amaphephancwadi afana nePanenka avule iingcango zokuyila ngaphakathi kwamaphepha abo. Liphephancwadi, esinokufumana kulo amabali ebhola ekhatywayo angaveliyo kumaphepha-ndaba amakhulu okanye kwiindaba zikamabonwakude, onke esongelwe kuyilo lomhleli olukumgangatho obalaseleyo.
Kangangeminyaka emininzi, le mpapasho ibisebenza njenge impembelelo kumacandelo amabini afana noyilo lwegraphic kunye nentengiso yehlabathi. I-Novum, liphephancwadi elipapashwa rhoqo ngenyanga kwaye libonisa eyona ndlela ibalaseleyo yoyilo lwangoku, umzekeliso, ukufota, uyilo lweshishini, phakathi kwezinye iinkalo.
Wazalelwa ngo-2016 eMilan, eli phephancwadi liphakathi kweencwadi zokuhamba, phakathi kwamaphepha ayo esinokuwabona iifoto ezisimemayo ukuba sihambe, ngaphezu kokusinika iindlela ezahlukeneyo zokujikeleza iplanethi.
Ikopi nganye enokuxinana okufanayo, kufutshane namaphepha angama-300, iCartography, isimemela kwindawo nganye esibonisa yona, isicatshulwa esiyintshayelelo, imephu enezilungelelaniso kunye nengxelo epheleleyo yeefoto.
Yawongwa ngo-2016, njengenye yeemagazini ezilungileyo zonyaka. Esi sithuba Isekelwe kwinto yemihla ngemihla kwaye iyayicanda ngokungathi sisiqendu samathambo.
Umyili uSandra Kassenaar ophetheyo Dibanisa okona kulungileyo kuyilo lokuhlela lwangoku kwiphepha ngalinye, apho kuvela khona imibhalo emikhulu, eyahlulahlulwe ngokubanzi ngokweekholamu, eneentlobo ngeentlobo zemifanekiso egcweleyo okanye enamaphepha amabini.
Ukuza kuthi ga ngoku ukhetho lwethu lwe Uyilo lwemagazini olungcono namhlanje, ngokuqinisekileyo sizishiyile ezinye, ngoko ungalibazisi ukusibhalela lolona yilo lungcono lwemagazini kuwe, leyo esebenza njengesalathiso kwiiprojekthi zakho zoyilo lomhleli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » UYilo lweMagazini omele Ulazi
Iinkqubo ezingcono zokwenza oopopayi